Umkhuleko wokuhlinzwa. ? Ngaphambi kokungenelela.
Umkhuleko wokuhlinzwa uma udinga ukubeka ezandleni zophakeme kube konke ukukhathazeka okubonakala kuthatha ingqondo.
Ngalezi zikhathi, ukuba nokholo lokunamathela kungaba kubalulekile, futhi ukukholelwa emthandazweni kusinika ukuthula nokuzola.
Uma kukhulunywa ngokusebenza akukho okungcono ukwedlula ukubeka konke ezandleni zoMdali uNkulunkulu wazo zonke izinto.
Izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi ungumphilisi wethu futhi akukho lutho esilucela uBaba ukuthi asinike lona. Ngemuva kwalokho sizokushiya umthandazo okudingeka uwenze ngaphambi kokuhlinzwa.
1 Umkhuleko wokuhlinzwa Yini?
1.1 Ngaphambi kokuhlinzwa
1.2 Umkhuleko wokusebenza kwesihlobo
1.3 Ukuze konke kuhamba kahle ekusebenzeni
2 Ngabe imisho izosebenza?
Umkhuleko wokuhlinzwa Yini?
Ngaphambi nangemuva kokuhlinzwa kukhona izikhathi zosizi nobuhlungu.Umthandazo ungathulisa yonke imicabango emibi ngenkathi ukhulisa ukholo lwethu.
Kufanele wethemba lokho izwi leNkosi Uthi uma sikhalela kuye uzosifundisa izinto ezinkulu nezifihliwe, enye yalezo zinto kungaba ukuphulukiswa kwemizimba yethu, ukuthula kokwazi ukuthi uNkulunkulu wenza okuthile asenzele kona nokholo lokuthi uyazi ukuthi nguyena owenza lo sebenza kithi.
Kuwo wonke lo mthandazo kubalulekile ngazo zonke izikhathi ukukhathazeka ukuthi njengabantu sidalulwe ukuze siphile.
UJesu Kristu uqobo usimema ukuba sibuze kubaba ngegama lakhe, ngakho-ke, imithandazo yethu ihlala njalo egameni likaJesu, simazi njengendodana kaNkulunkulu, onamandla onke ukusiphilisa futhi sigcwalise izinhliziyo zethu ngokuthula.
Ukwenza izigwebo ngaphambi kokuhlinzwa kwenziwa kungasisiza ukuthi senze izinqumo ezinhle njengodokotela, isikhungo sezempilo, izinsuku kanye nendlela umsebenzi ozoqhutshwa ngayo.
Ngakho-ke kubalulekile hhayi kuphela thandaza ngaphambi kokungena egumbini lokuhlinzwa kepha lapho inqubo yonke yangaphambi kwesibhedlela iqala.
Unkulunkulu uyangithanda, unginakekele futhi ungivikele
Nikeza ukuhlakanipha nekhono kodokotela nabahlengikazi bami
Benze bakwazi ukukukhonza ngothando nangempumuzo
NgoJesu Kristu, iNkosi yethu
Inhloso yokuthandaza ngaphambi kokuhlinzwa uhlala ukuthi uNkulunkulu ulawula konke okusazokwenzeka emzimbeni wethu nokuthi konke kuhamba kahle, lezo yizicelo ezimbili ezivame ukwenzeka.
Ngomkhuleko, kumele kube sobala ukuthi sibheke isikhashana lapho singasenakulawula ngalokho okukhona noma okungafanele futhi okuyimbangela eyinhloko esiholela ekutheni sizizwe singavikelekile.
Khuluma noNkulunkulu, uveze ukukhathazeka kwakho, umtshele ngokungazethembi, ukwesaba nakho konke okuzwayo, okuhle nokubi.
Memezela kakhulu ukuthi ukukunika amandla okulawula impilo yakho futhi umbonge ngokunikeza ukunqoba.
Umkhuleko wokusebenza kwesihlobo
Mnumzane, odokotela abaningi, abathandi bomsebenzi wabo
Ngiyabonga ngesipho sokuhlakanipha
ukuthi umnikeze yena.
Namuhla, izimpilo eziningi zisindiswa ezimweni ezedlule
Babengeke bathole noma yiluphi ikhambi noma ikhambi.
Nkosi, uyaqhubeka nokuba
umnikazi wokuphila futhi ukufa.
Umphumela wokuphela usezandleni zakho zaphezulu.
Nkosi khanyisela ingqondo nenhliziyo
banakekela ukuphulukisa umzimba wami ogulayo
futhi ahole izandla zakhe ngamandla akho.
Ngiyabonga ngomusa wakho omkhulu.
Uma lowo osuzongena egunjini okusebenza kukhona isihlobo, the umkhuleko Kufanele kwenziwe ngaphambi kwalokho futhi kugcinwe kuyo yonke inqubo.
Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi ungawadlulisela kanjani amandla amahle kwilungu lomndeni wethu ngaphambi kokuthi ungenelele, lokhu kuzokusiza ukuthi uhlale unethemba futhi unokholo olusebenzayo.
Angeke sathandazela ilunga lomndeni ngesimo esingesihle noma singabaze lokho uNkulunkulu angakwenza ngaleso sikhathi, kepha kufanele sigcine isimo sesikholwa esinikeza amandla, isikhuthazo, ukholo nesibindi kwilungu lomndeni ngaphambi kokuhlinzwa nasekupheleni kwayo yonke into. Kufanele ubonge uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Ukuze konke kuhamba kahle ekusebenzeni
Baba osezulwini, ngiyakuncenga ukuthi ungigcine futhi ungivikele
Futhi ukuba nesibindi esanele sokuhlinzwa lokhu kuhlinzwa
Lalela ukwesaba kwami ​​nokukhathazeka kwami
Futhi qiniseka ngokuba khona kwakho
Baqondise futhi ubusise odokotela abahlinzayo ukuze bazi kahle ukuthi yini okudingeka bayenze
Ubusise konke ukuphathwa nokunakekelwa engizokunikezwa
Ungiqinise ngamandla akho
Ngakho-ke ngizizwa ngingcono futhi ngilulame kahle
Ukucela uNkulunkulu ukuthi athumele izingelosi zakhe ukuthi zizosinakekela egumbini lokusebenzela futhi, ngokufanayo, ukumcela ukuthi abophe noma imuphi umoya omubi ofuna ukusiphazamisa kuyizicelo ezimbili ezivumelekile esingazenza nganoma yisiphi isikhathi.
Kubalulekile futhi ukuthi simemezele kanye nawe ngokuzwakalayo konke okuhle esifuna ukukubona ukuze kuthiwe lawo mandla amahle ayakhululwa bese izwi ligcwaliseka ezimpilweni zethu noma kweliliphi ilunga lomndeni, umngani noma umuntu omaziyo osazongena kwenye yalezi zinqubo.
Ngabe imisho izosebenza?
Ukuthandaza nje kuzokwenza kuphephe futhi kuthule.
Akukho okungcono ngaphandle kokuthembela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Uma unokukholwa enhliziyweni yakho, uNkulunkulu uzokusiza kulesi sikhathi esibi. Imithandazo inobufakazi bempumelelo kukho konke el mundo.
Vele thandaza unokholo oluningi ngaphakathi kuwe ukuze konke kuhambe kahle.
Ngabe umthandazo wokusebenza ngendlela oyithandayo?
Uma kukhona iziphakamiso zemikhuleko, unganqikazi ukuphawula ngalo mbhalo.
Ngale ndlela usize abanye abantu abazodlula enkingeni efanayo esele yenzekile.
Imithandazo eyengeziwe kuNkulunkulu: